Momba anay - Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
Momba ny Spring-Tex
Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd. dia orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fanondranana ny vokatra fandraisam-bahiny trano fandraisam-bahiny. Ny mpiasanay lehibe dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny sehatry ny lamba any an-trano. Ny sainy mamorona sy ny fahazotoany dia mahatonga azy ireo hiasa am-pahavitrihana kokoa amin'ity sehatra ity.
Manana fototra famokarana milamina izahay ary ny vokatra dia haondrana any Etazonia, Kanada, Aostralia, Eoropa ary Moyen Orient. Manaraka akaiky an'io fotopoto-pitsipika io izahay: ny kalitao dia ny fototry ny orinasan'ny orinasa iray, ny fahamendrehana dia ny ain'ny orinasa iray. Izahay dia mihevitra ny filan'ny mpanjifa ho laharam-pahamehana indrindra ary mampahafantatra hatrany ireo vokatra havaozina amin'ireo mpanjifa akaiky.
Tongasoa ireo mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hanana fifandraisana akaiky amin'ny orinasa miaraka amintsika ary hitondra fahombiazana sy tombom-barotra. Manantena ny fanitarana ny orinasanay miaraka amin'ny mpanjifa avy amin'ny faritra maro hafa eto amin'izao tontolo izao izahay.
Ny vokatray rehetra dia antenaina hampiadana kokoa ny fiainanao.